8 Waxyaabood Oo Fudud Oo Gabaryahay Uu Gacaliyahaaga Kaa Filayo - Aayaha
Aayaha editorNovember 12, 2018
Haddii uu nin ku jecelyahay isla markaana uu doonayo inuu xiriir kula yeesho, waxaa jira waxaayabaha qaar oo uu kaa filanayo.
Haweenka qaar waa ay sameyaan waxyaabahan balse waxaa hubaal ah inuu ninkaaga ku xushmeyn lahaa oo uu ku qiimeyn lahaa haddii aad u sameysid waxyaabahan soo socda oo ah kuwo aad u fudud.
Qof faham badan inaad noqotid
Ninkaaga waxuu kaa filayaa inaad noqotid qof wax fahamta ,wuxuu kuu arkaa qof muhiim u ah noloshiisa inkabadan haweenka kale, waxa uuna kaasii filayaa faham intaas kasii badan xitta marka ay kuwa kale fahmi Karin.
Inaad noqotid qof dhiiri galin badan
Haddii uu jiro qof uu ninkaaga u baahnaan lahaa inuu gadaal ku heysto ama ay garab taagnaato, waa xaaskiisa oo ah tan aad uga taxadarto, wuxuu filayaa inaad noqotid qof dhiirigelisa waqti kasta waqtiyada wanaagsan iyo kuwa xunba.
Qof ku kalsoon
Kuuma sheegi karyo tan, balse wuxuu filayaa inaad aamisantahay xitta marka uusan isaga isku kalsooneyn waxa uu doonayaa kalsoonidaas dheeraadka ah aad ayuuna u qiimeyn lahaa taas.
Inaadan waxyaabo fudud ka caroon
Ninkaaga waxa uu filayaa inaad u dulqaadatid waxyaabaha xad dhaafka ah ama isdaba jooga ah sida kaftanka ee uu sameeyo wuuna ogyahay in mararka qaar ay xad kabax tahay balse wuxuu kaa filayaa inaad noqotid qof dulqaad badan isla markaana aad joojisid inaad ka carotid waxyaabaha fudud ee uu sameeyo.
Ninkaaga waxa uu kaa doonayaa inaad tixgalisid waxa uu rabaa inaad uga mahadcelisid waxa yare e uu kuu sameeyo sida aad uga mahadcelisid waxyaabaha waaweyn ee uu kuusameeyo oo kale, waxa uu rabaa inaad u jeclaatid si daacadnimo ah isla markaana ku tixgalisid ood ku qiimeysid kaalinta uu uga jiro noloshaada.
Waxyaabo kedis ah
Waxa uu rabaa inaad kedis uga dhigtid waxyaabaha qaar, inaad hadiyad u keentid inaad shaqo uusan fileyn u dirsatid ama uu howsha kula qabto iyo wixii lamid ah.
Waxa uu filayaa inaad qiimeysid aragtidiisa xittaa haddii aadan ogoleyn inaad ku raacdid fkarkiisa waxa uu rabaa inaad mar kasta dareensiisid inuu qiimo leeyahay.
Haweenka sida ay u rabaan in dareen ama aragti gooni ah loo siiyo ayay raggana u rabaan taas, waxa uu doonayaa inaad il gaar ah ku eegtid ama aad dareen siisid si uu u dareemo inuu yahay qof la rabo.
9 Siyaabood Oo Lagu Hanto Qalbiga Gabar
5 Qaabood Cajiib Ah Oo Aad Ku Ogaan Karto Haddii Ay Gabadha Ku Rabto
Haddii aad Calaamadahan Ku Aragto Guurka, Ogoow Lamaanahaaga Kuma Siiyo Mudnaantii Aad Lahayd